Lalao Google's Dinosaur: ny fomba filalaovana azy amin'ny Internet, amin'ny findainao na PC | Vaovao momba ny gadget
Ignatius Room | | Tutorials, Videogames
Azo antoka fa manana ny findainao finday rehetra ianao, na farafaharatsiny ny ankamaroanao lalao hafa fa rehefa terena hiandry minitra vitsy ianao, rehefa mandeha fitateram-bahoaka, rehefa mankany amin'ny trano fidiovana ...
Rehefa mandeha ny fotoana dia azo inoana fa ho reraka amin'ity lalao ity ianao ary hitady fomba hafa. Fa raha tsy izany no izy, satria tianao ny haharetan'ny bateria finday avo lenta kokoa nefa tsy hijanona milalao dia azonao atao ny mampiasa ilay lalao dinôzôro google, lalao izay ampidirina ao anaty tranokala Chrome.
Ny lalao dinôzôro an'i Google dia nanomboka tamin'ny fomba nampihomehy Chrome nampahafantatra anay fa tsy nanana fifandraisana Internet izahay, toy ny tamin'ny taonan'ny dinôzôro, fa nanjary tafahoatra. Ity dinôzôro ity dia lalao iray, lalao tsotra be izay mametraka ny tenantsika amin'ny kirarin'ny dinôzôro isika ary tsy maintsy mitsambikina mihoatra ny sakana isika, amin'ny voalohany cactus, fa rehefa mandroso isika, ankoatry ny alina dia mahita pterodactyls amin'ny haavo samy hafa koa isika, ka indraindray tsy maintsy mitsambikina isika hisorohana azy ireo na hijanona mafy amin'ny tany, arak'izay azontsika atao. jereo ao amin'ny GIF etsy ambony.
Ary hoy aho ireo izay nandroso bebe kokoa, satria tamin'ny voalohany ny lalao hook, ary be dia be, noho ny fahasarotany, satria mandroso ianao, mitombo ny hafainganan'ilay dinôzôro izay hanery antsika hanao kajy amin'ny marimarina kokoa rehefa manomboka manao ny fitsambikinana isika mba tsy hifanehitra amin'ireo sakana.
T-Rex, araka ny anarany ity lalao ity, tsy eo amin'ny sehatra finday ao amin'ny Google Chrome ihany, fa azo alaina ao amin'ny kinova Google browser ho an'ny birao. Na dia marina aza fa ity lalao ity dia aseho mivantana amin'ny antsika rehefa tsy manana fifandraisana Internet isika, tsy mila miala an'izao tontolo izao tanteraka isika vao afaka milalao miaraka aminy.
1 Fetsy handroso araka izay azo atao ao amin'ny T-Rex
2 Ahoana ny fomba filalaovana ny lalao dinôzôro amin'ny Android
3 Ahoana ny fomba filalaovana dinôzôro dinôzôro amin'ny iPhone / iPad / iPod touch
4 Ahoana ny fomba filalaovana ny lalao dinôzôro amin'ny PC / Mac
Fetsy handroso araka izay azo atao ao amin'ny T-Rex
Raha ny filalaovana finday avo lenta na ny takelaka no tanjontsika, dia tsy maintsy tadidintsika fa tsy manana tetika ampiasaintsika isika, noho izany dia hiankina amin'ny fahaizantsika rehefa manisa rehefa tokony hanao ilay hitsambikina mifanaraka amin'izany isika.
Na amin'ny kinova finday na amin'ny kinova amin'ny birao, ny herin'ny fitsambikinana dia miankina amin'ny halavan'ny fanindry ny fanalahidy, koa raha manindry sy mitazona ny lakilen'ny habakabaka isika, hitsambikina lava kokoa fa raha manery haingana fotsiny isika.
Na izany aza, raha milalao amin'ny solosaina isika, dia tsotra kokoa ilay zavatra, satria afaka mampiasa Alt mankany isika miato vetivety ny lalao. Azontsika atao ihany koa ny manafaingana ny hafainganam-pandeha dinôzôro amin'ny alàlan'ny fanindriana ny daty.
Ahoana ny fomba filalaovana ny lalao dinôzôro amin'ny Android
Ny filalaovana finday Android-finday, ny fomba haingana indrindra raha tsy te-hametraka rindranasa hanaovana izany isika, dia ny fanalana ny rohy data sy ny fifandraisana WiFi, ahafahan'ny maody fiaramanidina.
Raha vantany vao navadibadinay ireo fifandraisana roa ireo dia hanokatra ny navigateur Chrome izahay ary hanokatra takelaka vaovao, takelaka iray izay hampiseho mivantana antsika ny dinôzôro, izay tokony tsindriantsika mba hahafahantsika mankafy an'i T-Rex manampy azy hitsoaka ny cacti izay eny an-dàlana, toa an'i Heidi any an-tendrombohitra Soisa.
Fa raha tsy te-hiala tanteraka isika dia afaka mametraka ny rindranasa Dino T-Rex amin'ny fitaovantsika, lalao maimaim-poana izay misy ao amin'ny Google Play Store, amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity ary manana alalana tsy takatry ny saina amin'ny tombom-barotra i Google, satria asehony amintsika fa manao doka miaraka aminy izahay. Ny fahasamihafana lehibe atolotray antsika amin'ity kinova ity dia ny hita amin'ny efijery feno ary miadana kokoa ny fitsambikinana.
Ahoana ny fomba filalaovana dinôzôro dinôzôro amin'ny iPhone / iPad / iPod touch
Araka ny efa nolazaiko, T-Rex dia misy amin'ny kinova Chrome rehetra ho an'ireo sehatra misy azy io, koa amin'ny iPhone, iPad na iPod touchantsika dia afaka milalao ihany koa isika amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny maody fiaramanidin'ny fitaovantsika sy ny fidirana amin'ny takelaka fanamoriana vaovao na famoahana indray ilay nisokatra tamin'izany fotoana izany.
Raha mila kinova maoderina ianao, misy loko sy biby hafa, Steve - Dinosaur mitsambikina Ho an'ny iOS dia ity no lalao tadiavinao, lalao apetraka ao amin'ny foibe fampandrenesana ary manana tanana haingana be lavitra noho ny mitady ny fampiharana eo amin'ny solaitrabe isika.
Steve - Lalao Widgetmaimaim-poana
Ahoana ny fomba filalaovana ny lalao dinôzôro amin'ny PC / Mac
Fa raha ny tiantsika hatao dia ny mankafy T-Rex am-pitoniana ao an-tranontsika na any amin'ny biraontsika mba hiala, afaka mampiasa ity pejy an-tserasera ity, pejy an-tserasera misy ny lalao tsy mila manapaka ny fitaovantsika ny fifandraisana Internet. Hisokatra fotsiny ity pejy web ity raha mampiseho ny lalao raha toa ka mampiasa ny browser Chrome.
Saingy, eo am-pelatanantsika koa ity tranonkala hafa antsoina hoe ity Mpihazakazaka T-Rex. Ireo andiany roa ireo dia mahatoky amin'ny lalao tany am-boalohany tao Chrome, azontsika atao ny milaza fa mitovy amin'ny kinova ireo, saingy tsy toy ny tranonkala teo aloha, ity dia mandeha amin'ny browser hafa.
Manana ihany koa izahay ny safidy teratany hahafahanao miditra ao amin'ny T-Rex nefa tsy mila miditra amin'ny pejin-tranonkala amin'ny alàlan'ny fanoratana ity baiko manaraka ity ao amin'ny bara fikarohana raha tsy misy teny nalaina hoe "chrome: // dino /" ary tsindrio ny bara habakabaka hanombohana ny lalao. Azontsika atao koa ny manoratra ity baiko manaraka ity raha tsy misy ny teny nalaina hoe "chrome: // network-error / -106" hiditra amin'ny lalao.
Amin'ny Internet isika dia afaka mahita mpitety marobe mihoatra ny Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera ary ny hafa, satria maro ny mpitety tranonkala eny amin'ny tsena izay tena zana-kazo Chrome izy ireo, noho izany amin'ity tranga ity, azo inoana kokoa fa tsy mandeha mihitsy izy io, fa amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo kaody izay nasehonay etsy ambony ao amin'ny bara adiresy dia azonao atao ny miditra amin'ny T-Rex.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tutorials » Lalao Google Dinosaur
nonabol dia hoy izy:
Mbola tsy nilalao azy akory ianao dia nanakorontana! Voalohany dia miova ho alina izy, ary avy eo manomboka miseho amin'ny haavo samy hafa ny pterodactyls. Isa sahabo ho 600 izany.
Mamaly an'i nonabol
Ny fahavoazana lehibe farany niseho tao amin'ny HTC dia ny filohany, Chialin Chang